Dina ara-pitondran-tenan’ireo kandidà : Tsy misy mihaino ny CFM -
AccueilRaharaham-pirenenaDina ara-pitondran-tenan’ireo kandidà : Tsy misy mihaino ny CFM
Hatreto mbola tsy naharenesam-peo ireo candida, mahakasika ny fanaovan-tsonia ny “dina ara-pitsipi-pitondran-tena sy fahitsiana ho an’ireo mpilatsaka hofidina”. Tsapa fa somary nangatsiaka ireo kandidà amin’ ny fandraisana anjara, taorian’ny fanomezana ny filankevitry ny fampihavanana malagasy ny fikarakarana. Ho an’ireo kandidà dia rafitra tokana ihany no arahina amin’ ny famolavolana sy fanomanana ny fifidianana, dia ny Ceni na vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana izany. Io dina ara-pitondran-tenan’ny kandidà io hatreto raha ny fantatra, dia mbola tsy nisy hevitra avy amin’ ireo kandidà mihitsy. Izany hoe ho terena hanao sonia ny dina izany ireo kandidà, ary izay tsy manao dia havoaka amin’ny haino aman-jery, izany hoe ho alaim-baraka. Hita fa dodona loatra amin’ity dina ity ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena, satria dia misy ny fanohanana avy amin’ny vondrona eoropeanina. Ny nahagaga, ny taona 2013, dia navita ireo kandidà nanatanteraka ny sonia ny dina ara-pitsipi-pitondran-tena ity, satria ny Ceni no nikarakara izany. Amin’ izao fotoana anefa, tsapa ny fahalainan’ireo kandidà. Ireo mpirotsaka hofidina rahateo, izay efa mahafantatra fa tsy voatery hanao ny sonia ny dina izy ireo. Mahafantatra tsara koa ireo kandidà, fa misy ny lalàna mazava mifehy ny fifidianana
Mbola afera maizina amina miliara mikasika fanondranana « bois de rose » nandritra ny Tetezamita indray ity hoentina amintsika androany ity, ankoatra ilay raharaha « bois de rose » mitentina 1 770 Miliara fmg nambara ...Tohiny